Shandong Gongxiang Mengyuan Trading Co., Ltd. dia fanafarana sy fanondranana varotra manokana amin'ny lalina orinasa fanodinana ny vokatra fambolena. Tamin'ny taonjato faha-21, dia namaly ny Antoko Komity Central ny antso ho amin'ny fanorenana ny "Road Silk Maritime" mba hamela Shinoa fambolena vokatra hanompo Azia Atsimo Atsinanana, Azia Afovoany, West Asia, Afrika Avaratra ary Eoropa Afovoany sy Atsinanana.
Shandong Gongxiang Mengyuan Trading Co., Ltd. no misy ao amin'ny mpanorina ny Confucianism, ny tanàna niaviany ny Confucius, Jinan, Shandong, Sina. Ny tanànan'i 72 Jinan manana anarana ny loharano, samy isam-pianakaviana rano lohataona, tokantrano nitomany hazomalahelo, amin'ny toerana manodidina tsara tarehy, ary izao tontolo izao malaza. Ny orinasa no tena miresaka amin'ny lalina fanodinana ny manokana fambolena vokatra, toy ny hoe: dipoavatra, Chili saosy vokatra, nasiana zavamanitra mampahatsiro azy mampahatsiro sakafo ny vokatra, mangatsiaka soja vokatra, am-bifotsy voankazo vokatra, Hawthorn ny vokatra, tongolo gasy ny vokatra, kily vokatra, lalina-Fizotry ny fanitsiana akoho lalina fanodinana vokatra sy vokatra hafa.
Ny orinasa foana ny mahaolona manaraka ny toe-tsaina "miara-miasa amin'ny laza, mitady fampandrosoana amin'ny kalitao, mandray tsena fangatahana toy ny mpitari-dalana sy hitondra soa fifanampiana sy handresy-hahazoako ny fototra" mba mitady marimaritra fampandrosoana.
Ny orinasa kolontsaina
Vision: Manaova ny aotra-lavitra sehatra ho an'izao tontolo izao ny mahatakatra Shinoa fambolena vokatra Mission: Mba ho ny mpitari-dalana sy ny no manao azy ny fambolena vokatra fanondranana orinasa, ary hampiroborobo ny fanapariahana ny Confucius kolontsaina Soatoavina: Avy Lilliput ho Fanorenana ny Community ny Human Health Lahatra